के अब सरकार १ महिना ६ महिनामा या १ बर्षमा सरकार परिवर्तन गर्नु सच्चा लोकतन्त्र हो ? ज्ञानेन्द्र शाही
काठमाडौ /सन्दर्भ:- सर्बोच्चको निर्णय अब उप्रान्त निर्बाचन नै नगरी दलका नेताहरु लाई यो यति बर्ष वा महिनाका निम्ति प्रधानमन्त्री हुने भनेर तोके भयो! किन निर्वाचन गरेर अरबौ रुपैया खर्च गरि राज्यको ढुकुटी रिताउनु ?
सवाल के निर्णय आयो भन्दा पनि के परिणाम आयो भन्ने हो। हिजो लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको दुहाई दिदै नेपाल र नेपालीको भाग्य परिवर्तनको सपना देखाएर सत्तारोहण गर्नेहरूको नियत छर्लङ्ग भएको छ। पाँच बर्षको स्थायि सरकारको दुहाई खोक्रो नारा साबित भएको छ। के अब सरकार १ महिना ६ महिनामा या १ बर्षमा सरकार परिवर्तन गर्नु सच्चा लोकतन्त्र हो ?
,के सरकार बनाउन बिभिन्न बहानामा संसद किनबेच गर्नु या तदनुरूप वातावरण बनाउनु लोकतन्त्र हो ? यदि हो भने अद्य्यावधिक निर्वाचन किन र के का लागि ? अब उप्रान्त निर्बाचन नै नगरी दलका नेताहरु लाई यो यति बर्ष वा महिनाका निम्ति प्रधानमन्त्री हुने भनेर तोके भयो! किन निर्वाचन गरेर अरबौ रुपैया खर्च गरि राज्यको ढुकुटी रिताउनु ?
नेपाल र नेपालीको हितमा हुने भोलिको परिवर्तनको पवित्र यज्ञमा लामवद्ध हुन सम्पूर्ण आदरणीय नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौ । धन्यवाद!
२०७८ असार २८, सोमबार १३:२२ 1 Minute 230 Views